Shiinaha Jiilkii ugu dambeeyay ee la qaadan karo dekedda 'miti dejiyaha' xeedho taleefanka gacanta ee casriga ah PD100W Soo-saar iyo Warshad | Staba Electric
Jiilkii ugu dambeeyay ee la qaadan karo dekedda 'muti portable smart' xeedho xeedho PD100W
1. Qaab yar oo isukeen ah oo ku jira cabir saaxiibtinimo.
2. Awoodda amarka degdegga ah ee degdegga ah oo badbaadinaysa illaa 50% waqtiga.
3. USB (A / C) dekedo awood badan leh oo loogu talagalay qalabka mobilada.
5. Waxtarka ugu sareeya ilaa 94%.
6. Awood qaybinta caqliga ee qalabka mobilada.
*Multi Usb C Xeedho Degdeg ah 100W Faahfaahinta Faahfaahinta
Fiijiye darbiga USB-C wuxuu ku habboon yahay dadka isticmaala ee doonaya xeedho isku dhafan oo miisaankiisu hooseeyo oo awood badan. Soo saarista illaa 100 W, xeedho darbiga PD dhammaan aaladaha aad jeceshahay oo ay ku jiraan taleefankaaga, Nintendo Switch, iyo MacBook (waqtiyada lacag bixinta waxay kuxiran yihiin aaladda qalabka).
Soo bandhigida isbeddelada ugu dambeeyay ee tiknoolajiyada xawaaraha sare leh, bixinta USB-C iyo la-qabsiga degdegga ah, hal xeedho oo keliya ayaa ah waxa aad u baahan tahay oo dhan si aad u awood u yeelatid aaladahaaga hadda jira ugana sii horreeyso qalooca wixii elektaroonig ah ee soo socda. Labada dekedoodba waxay gaarsiin karaan ilaa 18 watts oo ah danab danab sare leh wax kasta oo ka yimaada taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada illaa laptops-ka USB-C ee awoodda u baahan sida 12-inch Macbook. Waxay taageertaa lacag deg deg ah iPhone si ay ugu soo oogaan iPhone 8 ama goor dambe eber ilaa 50% 30 daqiiqo oo ay kujiraan fiilada la socota, iyo taleefannada casriga ah / kiniiniyada xawaaraha ugu fiican.
Waxaa ku shaqeeya GaN tech, xeedho-bixiyahan ayaa 30% ka yar kuwa kale ee xeedho-sameeyeyaasha ah, oo aad u isafgaradsan inuu kula socdo meel kasta oo aad tagto. Qalabkan 100W PD ee xardha oo leh USB-Power gudbinta macnaheedu waa lacag-bixin deg deg ah oo loogu talagalay qalabkaaga USB-PD-karti leh. Qalabkan safarka ah ee saaxiibtinimada ku shaqeeya ee labada xeedho ee darbiga ah waxaa loogu talagalay inuu 5 jeer ka dhiibo awoodda xeedhooyinka caadiga ah qalab fara badan oo isku mar ah. Soo bandhigida isbeddelada ugu dambeeyay ee tiknoolajiyada xawaaraha sare leh, bixinta USB-C iyo la-qabsiga degdegga ah, hal xeedho oo keliya ayaa ah waxa aad u baahan tahay oo dhan si aad u awood u yeelatid aaladahaaga hadda jira ugana sii horreeyso qalooca wixii elektaroonig ah ee soo socda.
PD xeedho darbi leh waafaqid & dabacsanaan sare, laba-in-mid xukun lacag taas oo awood u leh inay taageeraan dhammaan qalabka USBC iyo USBA ku shaqeeya sida telefoonada iyo aptops in ay u shaqeeyaan si madax banaan ama isku mar. Xeedho darbiga USB-ga oo leh naqshad furitaan la isku hagaajin karo ayaa kuu oggolaanaysa inaad ka fogaato xayiraadda meelaha kale iyo dib-u-dhigista dekedda USB A / C si loogu habeeyo ku-xirnaanta fiilooyinka ku xiran - gaar ahaan faa'iido leh marka la adeegsanayo fiilo koronto ama ilaaliye koror leh oo leh meelo badan. Fiijiye darbiga USB PD oo leh qaybinta awoodda Sirdoonka, oo badinaya waxtarka shaqada ee aaladaha hal ama dhowr ah.
*Multi Usb Xeedho Degdeg ah 100W Halbeegga
Cabbir: 63 * 63 * 30.5mm
USB-C1: 5-15V / 3A, 20V / 5A (Max 100W)
USB-C2: 5-15V / 3A, 20V / 5A (Max 100W)
USB-C3: 5-15V / 3A, 20V / 5A (Max 100W)
USB-C1 + C2: 65W + 30W (Max 95)
USB-C1 + C3: 65W + 30W (Max 95)
USB-C1 + C2 + A: 45W + 30W + 18W (Max ugu badnaan 93W)
USB-C1 + C2 + C3: 45W + 30W + 18W (Max ugu badnaan 93W)
Super Power 100w Gan Pd Xeedho
Waxay bixisaa awood aad u weyn oo 100W ah - oo ku filan in laga qaado 2 laptop-ka USB-C iyo 2 taleefannada casriga ah isla waqtigaas. Soosaarka USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 20V = 5A. Soosaarka USB-A 5V = 2.4A ugu badnaan dekedda.
Qoondaynta Awoodda Caqliga leh Macbook Pro Ckeyd
Waxay bixisaa ilaa 100W oo ah koronto xoog leh halka hal qalab uu ku xiran yahay dekedda USB-C, ama wuxuu u qaybiyaa wax soo saar ilaa 4 aalado isku xiran. Tani waxay awood u siinaysaa xawaare-xawaare buuxa oo qalab badan isku mar ah.
U Qalmida Universal QC 3.0 Wareegtada Darbiga
Waxaa loo habeeyay waxqabadka cillad la'aanta leh USB-A iyo taleefannada USB-C, kiniinno, laptops, iyo in ka badan, oo ay ku jiraan 15-inch MacBook Pro, 2018 MacBook Air, iyo 13-inch Dell XPS, iwm
Amraya Degdeg ah Multi Usb Charger Degdeg ah
Taasi waxay ku shaqeyn kartaa danab sare iyo bedelida soo noqnoqoshada taas oo keenta xeedho yaryar oo waxtar badan
Xiga: Safarka caanka ah ee awooda sare ee 65W nooca c pd USB xeedho PD65W